Iran: Nakatona ho an’ny raharaha ireo tsena satria mbola mitohy ireo fitokonan’ny mpivarotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2010 6:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Português, বাংলা, English
Niditra tamin'ny herinandro faharoa ny fitokonan'ireo mpivarotra ao amin'ny tsenaben'i Teheran. Nitohy ihany ny fitokonan'ny mpivarotra noho ireo hetra na dia teo aza ireo ezaky ny governemanta hikaroka marimaritra iraisana amin'ireo mpivarotra amin'ny fampidinana ireo hetra nakarina ho 30 isan-jato tamin'ny herinandro lasa teo, hanjary ho 15 isan-jato tamin'ny Alatsinainy. Nanomboka nanakatom-baravarana ihany koa ireo trano fivarotana any amin'ny ankamaroan'ireo tanàna toa an'i Tabriz sy i Isfahan.
Olon-tsotra maro mpampita vaovao no nitatitra ity tranga ity tamin'ny fanehoana ireo horonan-tsarimihetsika, ireo sary (tsenan'i Tabriz eo ambony ) ary tsikera raha toa kosa ka mangina sy miezaka ny tsy miraharaha ny iray amin'ireo fitokonana lehibe nisy nandritry ny 30 taona farany tao Iran ireo haino aman-jery ofisialy .
Fitokonana tao amin'ny Tsenan'i Teheran tamin'ny Alarobia 14 Jolay
Lesona tokony hianarana
Manoratra lahatsoratra i Change Iran [fa] sady mangataka ny “greens” hanatevin-daharana ny fitokonana. Manoratra ilay mpitoraka blaogy:
Ndao isika hiaraka amin’ ireo mpivarotra ary tsy hanary izao fotoana mety izao. Tsy hiverina amintsika izy ireo rahampitso raha tsy manohana azy ireo isika. Efa endrika firaisankina amin'izy ireo na dia ny fampahafantarana mikasika ny fitokonana atao amin’ ireo hafa fotsiny aza .
Manoratra i Stabris [fa] fa niditra amin'ny andro fahatelony amin'ny fitokonana ny tsena any Tabriz ary toeram-pivarotana maro any ivelan'ny tsena ihany koa no nanatevin-daharana izany.
Milaza [fa] i Dolat fa manome ohatra ho an'ireo hafa mba hitokona ireo mpivarotra . Mahalala ireo mpitoraka bilaogy fa sarotra kokoa ny mandeha mitokona raha mpivarotra ianao noho ny hoe mpiasa ianao, satria mora voadona matetika ireo mpivarotra no sady tsy dia manana firaisankina loatra.